Izixhobo zabantu abadala | Isiseko soMvuzo -Uthando, isini kunye ne-Intanethi
Ikhaya Ngawe Izixhobo zabantu abadala
Kwizixhobo 'zabantu abadala' sibeka amanqaku amahle okuqala kumntu ofuna ukuyeka indlela yokuziphatha egxile kwi-porn.
Ukusetyenziswa gwenxa kwe-intanethi kungakhokelela kwiingxaki zempilo yomzimba kunye nengqondo kwabanye abantu.
Indawo elungileyo onokuthi uqale ngayo kukuphulaphula ibali likaGabe Deem, indoda eyasekwayo Ukuqalisa kwakhona isizwe. Nanku uGabe ethetha kumsitho on Ukuxubusha Ubuninzi: Ukusetyenziswa kweentlekiso zoononografi kubafana abancinane kunye namadoda Iziko leSizwe kuXhatshazo ngokwesondo eWashington DC (12.30).
Uphando lubonisa ukuba amanani aneengxaki ayenyuka. Le webhusayithi ibonelela ngolwazi olunokukunceda ukuba usebenze ukuba ngaba Ukusetyenziswa kube yingxaki kwaye unako yenza malunga nayo. Ngaba ichaphazela yakho ngengqondo or ngokomzimba impilo? Ngaba ibangela iingxaki ze ulwalamano? Ngaba ichaphazela ukubanakho kwakho gxininisa kwizifundo zakho okanye emsebenzini? Ngaba ubukele izinto ozifumene ngaphambili zizothe okanye ayenzi Tshatisa isazisi sakho?
Oogxa bethu e Iprojekthi yeNyaniso ephukileyo sivelise oopopayi abancinci abasuselwe kuJason kunye no-Ulysses kwiintsomi zamaGrike ngeendlela ezininzi zokuthintela umnxeba we-siren we-intanethi (2.45).